चीनमा साइबर सुरक्षा अनुसन्धानको दायरामा, सामाजिक सञ्जाललाई कसरी प्रयोग गर्ला? :: BIZMANDU
चीनमा साइबर सुरक्षा अनुसन्धानको दायरामा, सामाजिक सञ्जाललाई कसरी प्रयोग गर्ला?
-केन्ट ह्यारिङ्टन /अन्तरराष्ट्रिय आलेख सेवा
प्रकाशित मिति: Feb 7, 2018 3:23 PM
अहिले रसियाले साइबर प्रयोग तथा प्रविधिको माध्यमबाट कसरी स्थापित प्रजातन्त्रलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ देखाइराखेको छ । चीनले पनि क्रेमलिनको खेलका केही पानालाई पक्कै ग्रहण गर्नेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आन्तरिक स्थायित्व कायम गर्ने र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चम्किरहेको चीनको छविलाई जोगाउने चीन सरकारको नीति रहेको बताएका छन्।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई आन्तरिक स्थायित्व कायम गर्नु उच्च प्राथमिकताको बिषय हो । यो बिषयले चीनको बार्षिक बजेटमा आन्तरिक सुरक्षालाई महत्व दिएको छ । औपचारिक बजेटमा कम देखाइए पनि चीनले एक सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी बजेट आन्तरिक सुरक्षाका लागि छुट्ट्याएको छ । अनुसन्धान र विकासलगायतका नदेखिने खर्च वा प्रतिरक्षा खर्चमा त बजेटको वास्तविक राशी यो भन्दा धेरैले बढी छ ।
उदाहरणका लागि चीनले सामाजिक सञ्जालदेखि क्रेडिट कार्डबाट हुने खर्चलाई अनुगमन गर्न प्रविधिको ज्ञान र ठूला तथ्याङ्क कसरी प्रयोग गर्ने अध्ययन गरिरहेको छ र चीनले सबै नागरिकलाई सामाजिक विश्वसनीयताको मूल्याङ्कन गर्न र सम्भावित समस्याका कडीलाई खोज्न प्रविधिको दायरा अघि बढाउने योजना सारेको छ ।
यसबाहेक सरकारले प्रविधिजन्य कम्पनीलाई कडा नयाँ कानून र साइबर सुरक्षा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको छ । सीका लागि क्रेमलिनले फेसबुक तथा ट्वीटरलाई दुरुपयोग गरे जस्तै गर्ने सहजताका लागि सामाजिक सञ्जालमा चीनको राम्रो पकड हुनु जरुरी छ । चीन सरकार विच्याट, वैवो र टेनसेन्टजस्ता कम्पनीका समितिमा स्थान पाउन र यी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथ्याङ्कमा पहुँच बनाउन प्रयत्नशील छ ।
चिनियाँ साइवर गुप्तचरले रसियाको सफलतालाई पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । वास्तविकता के हो भने चिनियाँ ‘ह्याकर’सँग प्राविधिक ज्ञानको कमी छैन । उनीहरूले अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानमा साइवरको हस्तक्षेप गरे, तिब्बती आन्दोलन तथा उइघुर आन्दोलनका सहभागी विरुद्ध घुसपैठ गरे ।
चीनका जानकार पश्चिमा विचारक तथा विश्वविद्यालयलाई आफू अनुकुल बनाए । उनीहरूले चिनियाँ नेताको सम्पत्तिका बिषयमा छापिएका आकर्षक पश्चिमा समाचार समाग्रीलाई ह्याक गर्न सफल भए । अझै चिनियाँहरूले रसियाली सुगठित सेनाबाट केही सिक्नुपर्ने हुनसक्छ ।
त्यसैगरी पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (पिएलए)का रणनीतिक विज्ञ आफ्नै साइवर युद्ध–नीतिका बारेमा क्रेमलिनको शिल्पकला सिक्न लागिपरेका छन् । चिनियाँ रणनीतिज्ञले ‘राजनीतिक कल्याण’का लागि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संघसंस्थालाई र खासगरी सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरी रणनीति बनाइरहेका छन् । यसकालागि रसियाली राज्यद्वारा लगानी गरेका आरटी र स्पुटनिकले दिनेजस्ता भ्रामक समाचार र षड्यन्त्रमूलक सिद्धान्त चीनका लागि शिक्षाप्रद हुनसक्छ ।
यसबाहेक चीनको साइबर क्षमतालाई फैलाउन राष्ट्रपति सीले चीनको सफ्टवेयर क्षमतालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सञ्चारमाध्यमको पहलमा विकास गरिरहेका छन् ।
उनले ती कार्यक्रमलाई अझै सुरु गरेको त पाइदैन तर यसका लागि आवश्यक तयारी गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । केही समय पहिले अष्ट्रेलियाको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको भनी आएका समाचारलाई लिन सकिन्छ ।
गतवर्ष एक जना चिनियाँ अर्बपतिसँगको सम्बन्धका कारण अष्ट्रेलियाली एक विधायकलाई राजिनामा दिन बाध्य पारिएको थियो ।
चीनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा उसको उपस्थितिलाई विस्तार गरेको छ । केही आँकलनहरूले चीन सरकारले नयाँ सञ्चारमाध्यम तथा प्रशारण सामग्रीमा प्रत्येक वर्ष करिब सातअर्ब लगानी गर्ने गरेको बताइन्छ ।
चीनको आधिकारिक समाचार संस्था सिन्ह्वा न्यूज एजेन्सीले विश्वभर १७० जति शाखामार्फत् विभिन्न आठ भाषामा समाचार छाप्ने गरेको छ । चिनियाँ केन्द्रीय टेलिभिजन (सिसीटिभी) का ७० वटा विदेशी कार्यालय छन् जसले विभिन्न छ भाषामा विश्वका १७१ देशमा समाचारको पहूँच पुर्याएको छ । चाइना रेडियो इन्टरनेशनल बीबीसीपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो रेडियो प्रशारण सेवा बनेको छ । यसले विश्वभर ९० रेडियो स्टेशनमार्फत विभिन्न ६४ भाषामा समाचार प्रशारण गर्छ ।
हुन त यी कुनैपनि सञ्चारमाध्यम अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको प्रमुख स्रोतका रूपमा स्थापित बनिसकेका छैनन् तर मध्य पूर्व तथा अफ्रिकालगायतका क्षेत्रका मानिसलाई सूचना दिने महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा यी सञ्चारमाध्यमले चीनको विचार प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । जसका कारण चीनप्रति सहानुभूति राख्ने जनसङ्ख्यामा विस्तार भएको छ ।
सीले सिनेमा तथा आम मनोरञ्जनका सामाग्रीमा लगानी गर्ने बिषयमा सहमति दिएर चीनको रीतिरिवाजलाई विश्वभर चिनाउन अग्रसरता देखाएका छन् । अलिबाबा, टेन्सेन्ट, होनी क्यापिटल तथा सरकारी चिनियाँ इन्टरनेट तथा वित्तीय कम्पनीले अमेरिकी सिनेमा क्षेत्रमा दशौँ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेका छन् । यसरी चीनले विश्व अर्थबजारमा आफ्नो प्रवेशलाई सहज बनाउँदै आफ्नो सञ्जाललाई विश्वभर फिजाउन सफल भएको छ ।
(केन्ट ह्यारिङ्टन अमेरिकी गुप्तचर संस्था, सिआइएका पूर्व वरिष्ठ विश्लेषक हुन्। उनी पूर्वी एसियामा नेशनल इन्टिलिजेन्स अफिसर, एसियाको स्टेसन प्रमुख र सिआइएको सार्वजनिक सम्बन्ध विभागका निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए।)
चीनमा साइबर सुरक्षा अनुसन्धानको दायरामा, सामाजिक सञ्जाललाई कसरी प्रयोग गर्ला? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।